Hondo BSD vs. Linux: fananidzo nyowani nechokwadi chose | Linux Vakapindwa muropa
Kuenzanisa BSD vs. Linux: icho chokwadi chese
Kune akawanda kuenzanisa yerudzi urwu paInternet, asi ruzhinji rwunoitwa nevadziviriri veBSD. Izvi zvinovaita kuti vasavimbike uye vasasarura, saka ndafunga kuti ndienzanise uku. Seye mushandisi weLinux uye FreeBSD kugoverwa ndinogona kunyatso kujekesa kana zvasvika pakuongorora ese ari maviri masisitimu, zvese zvakanaka nezvakaipira. Pamberi pekuti ini ndoda kujekesa kuti ese ari maviri akanaka masisitimu uye, zvakanyanya kukosha, akasununguka. Nezvo ini handidi kusiya BSD yakaipa nekuda kwayo, asi kuti nditsanangure kuti nei Linux yakabuda ichikunda uye yakapararira.
Ndeipi flavour yaunofarira? Linux ine mazana e migove izvo zvinoenderana nezvinodiwa nevashandisi vekupedzisira kana kumasangano akasiyana. Panzvimbo pezvo BSD ine misiyano inotarisa pane chimwe chinhu chakatarwa, senge kuita (FreeBSD), kugona (NetBSD), chengetedzo (OpenBSD), nezvimwe.
El kubudirira mune iyo BSD, inoitwa nemapoka evabiridzi (Core Team) nevamwe vanofunga kuita yakazara yekushandisa system. Linux, kune rumwe rutivi, kernel, kwete yakakwana sisitimu yekushandisa, uye inogadziridzwa mukubatana nemakambani, vabiridzi, vashandisi vekernel, uye nevamwe vanobatsira munharaunda. Linux zvirokwazvo ine mimwe mipiro uye kufambira mberi nekukurumidza.
Pamusoro pazvo rezinesi, BSD iri rezinesi rezvinyoreso zveBSD mashandiro. Iri rezinesi harinyimi, nekuti rinotendera zvigadzirwa kana maforogo kuve nerudzi rwecheti, ndosaka pangave nekutengesa uye yakavharwa BSD, muenzaniso Apple Mac OSX (EULA yakabvumidzwa uye yakabhadharwa). Pane kupokana, GPL ndiyo rezinesi iyo Linux iri pasi uye izvi zvinonyanya kudzvinyirira, kwete kubvumira zvigadzirwa kuti zvivharwe. Saka hatife takazoona Linux iyo isiri yemahara.
La kugadzikana uye kusimba zvakanaka mune zvese zviitiko, zvese paLinux neBSD. Asi kana imwe ikasimbiswa pamusoro peimwe, inenge iri Linux. BSD ine matambudziko ekugadzikana kana ichishanda nemamwe zvirongwa zvemazuva ano. Kuve monolithic kernels, madhiraivha anokanganisa kugadzikana kweiyo kernel kana dambudziko rikaitika. BSD ine matambudziko kuburitsa USB usati watanga kuiburitsa, ichigadzira Kernel Panic. Linux, kune rimwe divi, ine modular uye inobvumidza iwe kubvisa kana kuwedzera ma module zviri nyore pasina kukanganisa kugadzikana kweiyo kernel uye pasina kuita reboot.
El kuita kuri imwe nzvimbo ine madota ine ngano zhinji dziripo. MaharaBSD ndeye yakakwira-yekuita BSD iyo yakanyatsogadziriswa. Asi inokurumidza kupfuura Linux? Zvinenge zvichidikanwa kuti uiongorore zvakanyatsonaka, chokwadi ndechekuti mune akawanda maBenchmarks bvunzo dzinoitwa naPhoronix vakaratidza kuti BSD inononoka kupfuura kugoverwa kweLinux. Chimwe chezvikonzero zvekubvisa ngano ndechekuti BSD inogadzirwa paMac OS X makomputa anoshandisa iyo Clang compiler, compiler isinganyatso kumira kuti ive yeakanakisa. Linux yechikamu chayo yakagadziridzwa nekuda kweiyo GCC compiler uye iyi inogona kuzvirumbidza nekuve yakanakisa uye iyo inogadzira inonyanya kushanda kodhi.
Linux iri zvimwe akachengeteka yemipiro yakadai seSELinux neAppArmor, isingakanganwe nharaunda yakakura yevagadziri avo vari kugara vachiongorora kodhi yemabhugi uye kushupika uye nekuvandudza iyo kazhinji. BSD haina kuongororwa zvakanyanya uye nekudaro, kunyange hazvo vachiti muBSD zviri nyore kuona nekugadzirisa zvikanganiso nevakuru vechikwata chebudiriro, hachisi chokwadi zvachose. OpenBSD ndiyo BSD yakagadzirirwa kuchengetedza uye nekudaro yakachengeteka kwazvo, asi kusvika papi… uye nekuziva zvakawanda kuti Theo de Raadt, mukuru weprojekti yeOpenBSD neOpenSSH, akabvuma kusiya mikova yekumashure kuitira kuti FBI ipinde mumasisitimu aya.
Muchikamu usabilityLinux yasvika kuvanhu vazhinji neUbuntu uye nhasi zviri nyore kushandisa kupfuura akawanda BSDs. Ose ari maviri akapihwa graphical maficha anoita kuti zvese zviwedzere kunzwisisa, asi Linux yakafambira mberi mune izvi. Muchokwadi, kunyangwe iyo PCBSD, GhostBSD kana DesktopBSD, yakajeka yakanangana nemushandisi wemba, yakwanisa kuenderana nehuwandu hwakawanda hwekuparadzirwa kweLinux.
Kana zvakadaro Hardware kugarisana, Linux inotsigira matekinoroji matsva uye zvimwe Hardware nekukurumidza. Muchokwadi Linux haina zvakawanda zvekugodora Windows kana Mac OS X. Mundima iyi BSD iri makore akareruka kure, ichizviwana iri mudunhu umo Linux yaive makore gumi apfuura. Zvizhinji zvechinetso neBSD Hardware zvinouya kubva mukusimudzira kwayo, sezvo ichiitwa uchishandisa Mac OS X masystem, bvunzo dzinoitwa pamachina aya nekufungidzira system neVMWare. Izvo zvinoshanda mukufungidzira zvinogona kusashanda kana kuyedza system pamushini chaiwo.
El inowanikwa software yeLinux yakafara kupfuura iyo inowanikwa yeBSD, kunyangwe mukuzvidzivirira kunofanira kunzi Linux software inogona kuiswa paBSD nekugonesa kuenderana kwechinangwa ichi. Mundima iyi inogona kuhwina BSD, nekuti zvakare ine mapurojekiti akaita seWine uye mamwe emulators ayo anoita kuti software yemamwe masystem anoshanda ishande Kune rimwe divi, kana uchiongorora vhidhiyo yemutambo chikamu, Linux inokunda nekukoromora. Kune akawanda uye akawanda mitambo yemavhidhiyo yeiyo penguin system, nepo izvi zviri kushomeka kune BSD.
NetBSD, iyo system takurika par kugona kwave kutakurwa kweanopfuura makumi mashanu nematanhatu ekuvakwa kana emhuri dzemahara. Iwe unofunga kuti inorova Linux? Hungu kwete, Linux yakaiswa kusvika kune zana mapuratifomu (VAX, AMD56, x64, Itanium, SPARC, Alpha, MIPS, AVR86, Blackfin, ARM, ARC, Microblaze, SuperH, s32, PA-RISC, Xtensa, OpenRISC, PowerPC, m390k, nezvimwewo).
Unogona kuona kuenzanisa BSD vs. Linux pamwe yakawedzerwa uye yakakwana in the blog Architechnology. Ndinovimba iwe waifarira uku kuenzanisa uye kuti iwe unoziva kukoshesa zvakanaka zveiyo GNU / Linux system, pane kushora mamwe masystem usingazive zvavari kutaura nezvazvo.
Mamwe mashoko - Jorodhani Hubbard Mumwe Anosiya Apple
Kunobva - Architecture
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Kuenzanisa BSD vs. Linux: icho chokwadi chese
Apollo Aguirre Macias akadaro
Ruzivo rwakanaka, ini ndaisaziva kuti maBSD masisitimu aive ne "mavhenekeri" akawanda, ini ndaingoziva iyo FREEBSD neOPENBSD
Pindura kuna Apolo Aguirre Macias
Iwe unoti unenge usina rusaruro, asi ini handione kuenzanisa uko kunobatsira BSD. Kungokwanisa kumhanya Linux mabinaries.
BSD inotipa yakasimba kwazvo, yakagadzikana masisitimu uye iwo akakomba mapurojekiti kupfuura Linux. Iyo yekuburitsa chizvarwa maitiro yakanyanya kuomarara uye inodzorwa (tisingataure kuti FreeBSD inozara inoshanda sisitimu uye Linux ingori kernel).
Kune rimwe divi, zvese zvakanyatsorongeka, zvinyorwa zvakanakisa uye mapeji emurume anoshamisa.
Nezve kushandiswa kwemaitiro ese ari maviri, mune dzimwe nguva FreeBSD iri nani, mune vamwe GNU / Linux. Ndakave nezviitiko zvine hurema traffic uko FreeBSD inoita zvirinani.
Pasina kupokana, kune mushandisi akajairika pane desktop PC, GNU / Linux ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo, nekuda kwerutsigiro rwainopa maererano nezve Hardware uye nekuda kwekuvandudzwa kwenzvimbo dzakanangana nekureruka kwekushandisa. Asi mumaseva, inyaya inofanirwa kuongororwa, semuenzaniso ini ndaizovimba zvakanyanya muOpenBSD kana FreeBSD inoshanda seye firewall, nekuda kwekusimba mune iyo mamiriro uye nekuda kweiyo firewall pachayo (iri pachezvangu, asi ini ndinoda pf pamberi pe iptables).
Ndiri kuona kuvandudzwa kweLinux seboka revanhu vanoda kufukidza zvakawandisa Hardware sezvinobvira, vasina kuenda zvakanyanya kumatambudziko ezvekuchengetedza. Kune rimwe divi, iyo Hardware inotsigirwa muBSD ishoma, asi inovimbiswa kuti inoshanda yakatsiga mune zvayinotsigira. Zvichida kufambira mberi kunononoka, nekuda kweiyo yakaderedzwa nhamba yevagadziri ichienzaniswa neLinux, rutsigiro rwemakambani, nezvimwe. Asi ini ndinozviona zvakakomba zvakanyanya.
Imwe nyaya yakakosha kwazvo muBSD ndeyomuti wemachiteshi, inotibvumidza kuisa software kubva kunowanikwa kodhi, nemukana wakajeka wekugona kuishandura uye kuigadzirisa kune zvatinoda. Kana kunyora nemireza izvo zvaizotipa bhenefiti zvinoenderana neyakavakirwa.
Nezve marezinesi, iyo BSD inoita senge yakapusa uye zvine musoro. Nekuti kana tichitaura nezverusununguko, iyo GPL iri kutirambidza kushandura zvirongwa nekuparadzira mabhainari tisina kodhi yekodhi, nepo BSD isiri. Hakusi kurambidzwa here pane rusununguko? Nechibvumirano cheBSD, ndakasununguka kuita chero zvandinoda nekodhi.
Mukupedzisa, ese ari maviri masystem akanaka kwazvo. Zvinoenderana nemamiriro avanenge vachizoshandiswa kana pane kuravira uye ruzivo rweumwe neumwe kuti asarudze kuti nderipi rekugara naro.
Usave benzi Juan. Iyo GPL inovimbisa kuti software inoramba iri yemahara. Iyo inorambidzwa kune chimwe chikamu cherusununguko rwakakwana, kuitendera kuti igare yakasununguka, kwete zvachose.
GNU / Linux inoongororwa nemakambani mazhinji. BSD kune vashoma chete.
Iwe une maturusi anoshanda zvakanyanya kupfuura BSD uye maitiro ayo ekuvandudza anotendera iwe kuti uvandudze tekinoroji uye utore chikamu mune yakawanda nhamba yezviitiko.
FreeBSD yakanaka chete munzira dzakanyanya.
Uye rega kuva jerk yakadaro, zvakajairika kune vateveri veBSD kurwisa GNU / Linux.
Zvakare FreeBSD mune Hardware rutsigiro iri kumashure kumashure munzira zhinji. BSD inoshanda chete munzvimbo diki.
Mhoro Anm, unoita kunge usina hunhu kwandiri nekuda kwenzira yaunotaura nayo kune vamwe vashandisi nekutuka, uye newe wakakanganisa zvakanyanya nekuti kunyangwe iro rezinesi reGPL mune dzidziso inochengetedza rusununguko necopyleft, mukuita Linux izere nemabhuru emabhurumu ayo kodhi yekodhi hakuwanikwi. Uye izvi hazvina kutaurwa neni, zvinonzi semuenzaniso naGreg Kroah, mumwe wevanogadzira Linux, kuti Linux inotyora GPL.
Saka kana ukasashandisa linux-libre kana iyo kernel iyo Debian inopa nekumisikidza, kernel yako iri kure nekusununguka uye ndinovimba haushandise adobe flash plugin, nekuti izvo hazvisi zvemahara, kana mutengi weSkype , Spotify nezvimwe.
Vazhinji vashandisi veLinux vanovenga Microsoft.Iwe unoziva here kuti Microsoft ndeimwe yemakambani anopa zvakanyanya kuKernel? Kufanana nemamwe makambani mazhinji ehunhu hunopokana. Ikoko unayo, zvese zvine hukama kwazvo.
Uyezve icho chimwe chinhu icho chaunoti nyika yeBSD haigadzirise, wakamboshandisa SSH? Yakagadziriswa nevanhu veOpenBSD, zvirevo zvakaita seTCP / IP uye DNS mainstays eInternet ane simba rakakura kubva kuUnix neBSD nyika, pazvakazoonekwa kuti yakavhurika SSL yakaita senge Gruyer's chizi kubva kuhuwandu hwemaburi yekutanga. kushanda pane Yakavimbika kuitiswa vaive vanhu veOpenBSD neLibreSSL. ZFS Unoziva here kuti chii? vekutanga kugadzira chiteshi vaive vanhu vaibva kuFreeBSD, unoziva here iyo pkgsrc, imwe yemhando yepamusoro mapakeji masisitimu? Unoziva here DranonflyBSD imwe yemhando yepamusoro sisitimu dzekushandisa? Uye matanga muFreeBSD ayo kusvika panguva iyoyo makambani mashoma aive aita zvakafanana. Uye zvichingodaro kwenguva refu nezvimwe.
Uye zvino unozvibvumira kufonera vashandisi veBSD vanonyanyisa ... asi ndapota, kana iwe usingazive pane imwe nyaya kani usazviburitse nehunhu uhwo, iwe unopenga.
Chekupedzisira, taura kuti ichi chakasainwa nemushandisi weGNU / Linux uyo anofarira rezinesi reGPL renzvimbo yaro yemagariro, asi ini ndinoona kuti vanhu veBSD vanoita zvinhu nemazvo apo Linux iri kuwedzera huturu hwekernel huzere nezvimedu uye Binary blobs iyo imwe neimwe kambani Inoisa kutsigira zvigadzirwa zvavo.
Pindura kuti uname
Mune zvikamu, ndibatanidze, ndinobvumirana newe:
1) Anm haina hunhu, kusawirirana zvine musoro uye zvakajairika, zvinogadzira gakava uye chinhu chakanaka, kwete kutuka.
2) BSD haisi yakaipa yekushandisa system, zvisinei kuti angave ani, zvinoitika ndezvekuti kune zvimwe zvinhu zviri nani pane Linux uye kune vamwe kwete, uchifunga izvo, zvaunofarira uye zvaunoda, unogona kushandisa imwe kana iyo zvimwe uyezve chimwe chinhu chiri nani, kushandisa zvese zviri zviviri, zvichizadzikirana.
3) Izvo hazvisi chaizvo izvo zvinopa kune kernel, ndeyekuti ivo vaona kugona kweLinux (iyo iyo vasati vatendera kubvumidzwa kuwana kubva kuWindows partition) uye ikozvino (ndeipi mamiriro ekunze), kuripa iyo ine zvakanzi, kukwanisa kuishandisa (iyo tsanga). Sei? Zvakanaka, kana iwe ukatarisa kuwanda uye kugoverwa kweLinux, une maWindows application, senge Skype, kana kupinda kune Hofisi kunyorera ... Hongu, Linux inotakura yakawanda uye yakawanda software yekudyidzana (Nvidia nevechitatu-bato madhiraivha, Chrome, Dropbox, Steam, iyo Flash Player plugin, Teamviewer, Opera, Spotify, Crossover, Vivaldi, WPS uye zvimwe zvakawanda zvakandisiya mupombi). Uye zvakare ine Spyware (kana Microsoft ikaziva kuti Skype tsori pauri, unogona Google uye wozvionera wega).
4) Asi haigumire ipapo, kwete Microsoft chete inozviita, Canonical inoita futi. Vamwe vacharangarira mukomana akati Ubuntu telemetry kwauri, vakamutumira tsamba yemutemo kubva kuCanonical, vachimuraira kuti arege kushandisa izwi rekuti Ubuntu nemucherechedzo wayo (saka akatadza kutaura nezvazvo).
Ubuntu uye zvigadzirwa zvayo zvepamutemo (Xubuntu, Lubuntu ...) kwete chete kutakura software yakawanda yekudyara mukati, ivo vanoongorora pane zvese zvaunoita. Iye murume, pane rake blog, akaudza maitiro ekumisikidza zvese izvo telemetry / spyware kuitira kuti vasatambe neyakavanzika yako ...
5) BSD iri nani pane Linux mune dzimwe nzira uye yakaipa mune vamwe, asi izvo hazviite iyo yakaipa OS zvachose.
6) Panyaya yepropathiary software uye spyware, zvinosuwisa, Linux, mune zvakawanda zvakagoverwa, haisisiri yemahara, uye ine spyware, makorokoto, imwe nhanho yekuita kunge Windows. BSD mupfungwa iyoyo ichiri yemahara uye isina iyo spyware inonzi skype.
7) Tinofanirwa kunetseka nezve izvo Microsoft iri kuita neLinux ... Kugoverwa kweLinux kuri 100% yemahara kuri kuita kushoma uye kushoma.
Ichokwadi BSD inogona kuve yakanaka kwazvo seye firewall, asi kana iwe uchida zvimwe zvemberi sarudzo senge kuenzanisa data reQOS, kana kumisikidza Radius server, izvo hazvipo muBSD. Iyo ishoma kwazvo maererano nesarudzo muLinux kune zviuru zvemakernel module ekugadzirisa server kana iwe uchida kutanga kuita zvinhu kumberi zvishoma.BSD inoperevedza. Mushure meiyo yemuti wemachiteshi ... kune izvo kune Gentoo uye kunyange Arch neayo Arch Vaka Sisitimu.
Pindura kune vacagnu
manyepo ekuti Microsoft ndiyo inopa zvakanyanya kune kernel. Paunenge iwe wagadzirisa iyo nzira, iwe uchafambisira mberi chimwe chinhu.
Pindura kuna adhoj
Nechokwadi chese? Ndapota…. Linux yakachengeteka kupfuura BSD? Zvimwe zvinobudirira? Amai…
Iwe unofanirwa kuzvinyora wega zvirinani. Theo haana kumbobvuma kusiya mikova yekumashure paOpenBSD. Muchokwadi, Darpa akamira kupa nekuda kwekutsoropodza zvematongerwo enyika epasi rose eUnited States. Kupfuurirazve kodhi yeOpenBSD yakaongororwa uye hapana masuo ekumashure, uye zvakaitwa kuratidza kupomedzerwa kwenhema.
Pindura kune satartic
Iko kuenzanisa kwakanaka (?), Ini ndinongoona zvirevo zvinotsigira Linux uye blah blah blah. Ndiri mushandisi we linux asi ini ndagara ndichifarira * BSD.
Iyo BSD yakafanana linux makore gumi apfuura? Ndechipi chikuru kupusa iwe kwaunofanira kuverenga neiyi pseudo internet nyanzvi. Inenge nguva dzose matekinoroji matsva ari muBSD neLinux aine anoverengeka mwedzi mitatu yekusiyana (semuenzaniso iwo mutemo weTRIM, AHCI, IPv10 nevamwe vazhinji)
Zvisinei, ini ndinofunga maGNU jihadist anotsamwiswa nekuti BSD haishandisi marezinesi eGPL, inoshandisa gcc compiler uye inozvidaidza yega mahara software uye zvese izvo verbiage.
Zvisinei, ini ndangoona kuti kune mumwe munhu anowedzera Taliban kupfuura linux fanboy: a BSD fanboy !!!
Hongu / Hongu
monolithic uye modular system, kana iwe usingazive, usashama muromo wako
Iye mukomana uyu akamboshandisa kldload here? iye he! murombo asingazive ... handizive kuti vanomurega sei achiburitsa marara seizvi, dzidza zvakawanda usati waenzanisa ...
Pindura kune Asingazivi
Iko kusanzwisisika uye kwete kwakanyanya kuenzanisa kwandakaona muhupenyu hwangu kwakakodzera chaizvo kune ANOGONESA anoda Linux, chokwadi chekuti vazhinji vedu tinoshandisa Linux hazvireve kuti tinozvidza vatungamiriri veBSD mukuita nekuchengeteka pakati pezvimwe zvinhu, iyi blog inofanirwa enzanisa kwete kuzvidza, Zvinosekesa zvakadii.
Mukuyedza kwangu kuswedera padhuze neLinux - kuda kusiya Windows - ini ndawana yakawanda tsika yekunyanyisa kupfuura tekinoroji. Kune mashoma mabloggi uko kuenzanisa pakati pevamwe maOS kunosvikwa zvisina tsvete, tisingataure pakati peiyo imwechete Linux distros! BSD inondibata (kunyangwe ini ndisina kuishandisa) uye ndinofunga kuti kunyangwe yaive lousy inoshanda system paisazove nechikonzero chekutuka vashandisi vayo.
Kuzvinyora zvakanyanya ndizvo zvaunofanira kuita usati watsikisa kungorova! .. chirongwa chekushandisa hachina kumbobvira chiri nani nekuti chinoshandiswa nenhamba yevashandisi, kana isiri yezvipo nemhinduro dzinopa mushandisi, neimwe nzira, mushandisi yeMac inogona kuti Mac iri nani pane Windows kana Linux kana BSD, mune zvese zvinhu zvekupenga zvecomputer zvinopofumadza kuvhurwa kwetekinoroji nyowani kana kuedzazve masisitimu ayo sekuziva kwedu ndiyo nzira inoenderana nemushandisi uye kwete zvinopesana.
Pindura kuna abrkof
Cesar Augusto Balcazar De los Santos akadaro
Asi zvekuita ari pachokwadi, kunyangwe kana mazhinji akagadzirwa pano nekuda kwekunyanyisa kwavo kuti bsd inobatsira. Iwo mabenchmarks anozviratidza, zvirinani zvinotaurwa nemiedzo.
Pindura kuna César Augusto Balcazar De los Santos
Juan Torres chinobata mufananidzo akadaro
Iyo Linux kernel haina kunge modular ichienzaniswa neBSD ...
Zvakare, ini handina kuona chero chinhu nezve mabhenefiti eBSD. Ini ndinoshandisa Linux masisitimu, asi ini ndaifarira kuyedza FreeBSD. Uye zvinosuwisa kuti chinongedzo chakatumirwa kumagumo kwechinyorwa hachiwanikwe.
Pindura Juan Torres
Mukomana ane ndebvu kusvika muchiuno akadaro
Kana iwe uchida "chokwadi chese", heino izvi (zvinouya kubva kune mumwe munhu akashandisa zvese zviri zviviri):
Kana iwe uchida sevha isina yakawandisa matambudziko kana yakatsiga uye yakazara programmhu nharaunda uye iwe usina hanya nekukanganisa kweGPL rezinesi, wobva wasarudza Linux.
Kana iwe uchida zvese zvataurwa pamusoro, uye uchida rezenisi reBSD iro rakasununguka zvekuti unogona kana kuvhara kodhi, shanda pairi uye uitengese (sezvakaita Apple neMac OS, kana Sony ine PS3 nePS4), ipapo sarudza BSD.
Kuita zvine hungwaru, hazvina basa! Kana Google ikashandisa Linux uye NASA inoshandisa BSD haina kunyanya kuita asi nekuda kwehunyanzvi zvikonzero, zvirokwazvo masayendisiti mazhinji erabhoritari anoshandisa ... Windows! Kana iwe usina komputa yekare kwazvo (uye yakauya neWindows pre-yakaiswa) ese ari maviri Linux neBSD inomhanya pasina kunetsekana (ini ndine komputa yekare kubva muna 2006 ine 1GB ye RAM yandinoshandisa kuyedza uye inomhanya neshanduro dzichangoburwa yezvose pasina matambudziko).
Uye kana iwe uri mukomana akajairika asingafarire chero pamusoro apa uye nechimwe chikonzero Windows haina kukodzera iwe, wobva wasarudza Linux, chinova chinhu chakafanana neUnix yevatangi vane "zvishongo" (GNOME, KDE, UNITY, nezvimwewo), uye siya BSD kune vashandisi vemberi.
Nezvese zvataurwa pamusoro, zvese Linux neBSD zvine matambudziko mazhinji (kusaenderana kwemutyairi, zviputi, nezvimwewo), uye unogona kuva nenguva dzinorwadza (handifunge kuti zvakafanira kutaura zvese, unoziva zvandiri kutaura nezve). Dzimwe nguva kugadziridzwa kuri nyore kunogona kukanda masisitimu kwauri uye ini handina basa nezvinotaurwa neve mafeni: kana usati wati "Izvi zvinoyamwa!" pane kanopfuura kamwe chiitiko kana uchishandisa Linux kana BSD, saka hauna kuzvishandisa zvakakwana.
Pindura mukomana ane ndebvu kusvika muchiuno
Ini ndatoenda kupfuura ese uye ini ndinofunga ndinogona kupa chinangwa chinangwa, kunyange hazvo mumwe munhu achati patatá! uye # @ grrr!, asi ndoenda ini:
FreeBSD: yekufungidzira kwakajairika senge kwete: kuomarara kwekumisikidza, ruzivo rwemberi muUNIX nemabhugi, zvinogara zvichingoitika kupfuura zvakajairwa izvo zvinowanzo kutungamira kuti unyore futi angangoita ese mafaira ekugadzirisa, achikukanda kumashure. Zvino, kana iwe uchizoshandisa iyo kubata network, saka hongu, nekuti pf haisi iptables, uye nekuti inokurumidza pamwe chete naApache neMariadb… .uye kusvika pano ini ndinoredza.
Linux: isu tinofanirwa kutanga ne: ndeupi wavo? Iwe haugone kuumbiridza uye kuputira mune izwi linux toooodo iyo chromatic renji yekuparadzira, uiise mune fanera wobva wati: Güindous fortin!. Linux inowirirana uye inobuda. Linux ndiyo paella. FreeBSD muchena mupunga. Asi kusiya madimikira nekuti ini ndave kuziya nenzara uye firiji haina chinhu, kekupedzisira pandakatarisa broccoli iyo yainge yashandura uye ichipa huni yenguruve yakatemwa. Tora nezviitiko zvangu:
-Ubuntu: Ndakatanga na6.04. Matambudziko mazhinji. Zvizhinji. A musoro. Asi ndakashingirira ndikauya 10.04 uyezve 12.04, kunyangwe ndaifanira kuisiya imomo nekuti iyo HDD yakaputika, uye vakaisa windows 8 pane iyo nyowani 64-bit komputa. Asi ini handina kuidzosera. Inogadziriswa. Kune wepakati mushandisi zvakanaka. Zvakare, iwe unogona kuita zvinhu zvakawanda nazvo, asi ipapo pandakaenda kunotora 14.04, ndakanzwa kuti chigadzirwa chakange chiri kuchimesa ...
-Linux Mint: Ndakaedza iyo distro yakavakirwa paUbuntu 14.04 uye… inoshandisa zvishoma zviwanikwa, iwe unogona kuita zvakafanana neUbuntu uye zvakanaka. Kune ese ari maviri, chokwadi chekuti: dzinogona kushandiswa semaseva, kunyangwe zvisinganyatsojeka kupfuura FreeBSD, unogona kuzvimisikidza kubiridzira, kubhowa, dhizaini yemitambo, mitambo, multimedia, zvirongwa: NetBeans, QT Musiki (nharaunda), Gambas, nezvimwe. .., nemaraibhurari ese auri kutsvaga aRuby, Python, C ++, VBasic, Borland, Pascal, Java ... Yakanyanya kugadzirisika munzira dzese, kwete chete kutaridzika kunoratidzwa nevashandisi veFreeBSD sekupusa, apo chii zvinoita kufambisa kushandiswa, asi zvese.
Ye server: FreeBSD, ArchLinux, Red Hat uye zvigadzirwa zvavo vese, uye Suse.
Kune vashandisi, vemhando ipi neipi: ZVESE, kunyangwe ini ndisingakurudzire FreeBSD, ArchLinux, Gentoo kune avo vanobva kuWindows vasina kutanga vapfuura nemamwe ma "home" distros akadai seChromixium, Zorin kana Chaletos.
Kutenderera kuburitswa hakushandiswe pane server ... manco
Edward Inda akadaro
Pindura Eduardo Inda
Kungoverenga iwo musoro wepfupiso wekupinda kwakapfuura mu techrepublic wakandiudza kuti handifanire kutambisa nguva yangu.
Makorokoto. Yako trollsensacionalista chinyorwa yawana imwezve yekupinda. Zvakare domain-rakapamhamara runyorwa, hazvo.
Ndiri kuzotumira kuna taringa kwechinguva uye ndoverenga nhau kubva kuForocoches. chisarai.?
Ini handibvumirane nezvakawanda zvezvinhu zvinotaurwa nechinyorwa chino. Kunze kwekutaura ngano (chinhu pamusoro paTheo de Raadt neFBI), kana kuti BSD isoftware yekare, kana kuti Linux yakachengeteka zvakanyanya, nezvimwe .. haina kuongorora maitiro maviri anoshanda zvakaenzana (tsime, Linux ingori Kernel , iyo system ingave iri GNU).
Izvo izvo "linuxers" zvisingafunge (kune zvinyorwa zvandanga ndichishandisa Debian GNU / Linux pane yangu laputopu kweanopfuura makore gumi) ndezvekuti kana iwe ukabvisa madhiraivha epamutemo, maraibhurari anezvivakwa uye software yekudyira kubva kuLinux, Linux yaisazodaro. uve nerutsigiro rwehardware uye nemutambo wakawanda uye nekushandisa kwakawanda sekutaura kwechinyorwa kuti chinacho.
MuFreeBSD kana OpenBSD isu tinongoda kuve ne100% yemahara software uye 100% madhiraivhi emahara, kuve nehurongwa hwakachengeteka, hwakavimbika, hwakasimba asi, pamusoro pezvose, izvo zvinopa vashandisi rusununguko rwekuchinjisa nekuchigovera zvakasununguka, uye kuti hapana chishandiso. vechitatu mapato vanovasora.
Uyu ndiwo mutsauko nhasi, kuti wepakati "linuxero" anongoda kuve nechupiguay desktop ine akawanda mafomu, uye ivo vari kukanganwa mavambo ekuti nei Linux yakagadzirwa, uye zvakanyanya, nei Richard Stallman akagadzira GNU.
NeBSD tinochengeta mweya iwoyo. Pamusoro pe, zvechokwadi, kuva nematafura akajairwa (Gnome3, KDE4, xfce, uye zvese zviri pamusoro), mapurogiramu ekushandisa (Geany, Emacs, nezvimwewo) uye masevhisi ekugamuchira, chengetedzo, kuongorora, nezvimwe.
Mukupedzisa, kana iwe ukabvisa zvese zvivakwa kubva kuGNU / Linux (isina-yemahara, mune debian) inogona kutaridzika zvakanyanya kunge chero komputa ine BSD yakaiswa.
Kwazisai vese. Rarama kwenguva refu Mahara Software uye refu rarama Anarchism
Pindura kuna joan
Joan, nyatso kubvumirana nezvose zvaunotaura uye Rarama hupenyu Nyonganiso!
Imwe nyaya, Joan, mumaonero ako iwe unofunga kuti ine chekuita nemagariro, Linux-based distro ine rezinesi ine nzira yemagariro seGPL asi izvo zvazova izvi.
Pamusoro pemablobs, mabhainari, mafirmwares, uye mabhoti andakataura nezvazvo mukupindura kutaura kwaAnm.
Kana iyo BSD inoshanda masisitimu ane hushamwari munharaunda, iine chenjedzo kwazvo budiriro, inotungamirwa nenharaunda dzinobira, pasina makambani makuru anotenderera-tenderera akasununguka, asi aine rezinesi iro, kunyangwe risingadzikise rusununguko kune vashandisi, risingachengetedze kana.
Chinhu chakandinakira chingave chimwe chinhu senge GNU / BSD asi zvichave kuti hapana kunyanya kunzwa! XDDD
Makomendi akanaka zvachose. Asi ini ndinoona imwe nenjodzi diki ichishandisa mazwi asina hushamwari uye asina basa. Ngatisakanganwe kuti isu tiri pawebhu uye munhu wese anotiverenga.
Maonero acho chete maonero.Kudzingwa pasina kuratidza kongiri data kuri nyore ..
Pindura kuna elvis
Joan. Pasina kupinda mukusafanira nekuti isu tiri pano kuzokurukura zvine rugare, ndinofunga iwe wakakunda nechikamu chekupedzisira chemashoko ako.
Sawe, ini ndinoshandisawo linux. Zvinotaridza senge OS kwandiri, yakanakisa.
Ini ndinozvininipisa ndinotenda kuti mareferensi ako kune chinodiwa cheasina-emahara anogona kunge ari nekuda kwekugadzwa kwako kwehardware.
Mune yangu kesi, yangu yese system inoshanda zvinoshamisa kusanganisira iyo vhidhiyo kadhi, (kunyangwe kana ndikaisa yevanobata NVIDIA madhiraivha kuburikidza neayo control panel).
Kune vamwe vese ini ndinoshandisa zvinoshandiswa zvemarudzi ese uye ini handifanirwe kushandisa chero yekuwedzera isina-yemahara kunze kweiyo iyo Debian inopa nekumisikidza.
Ndine hurombo kumutsidzira kutumira kubva 2014, asi semunhu wepachena software mushandisi ndinoda kutaura.
Ini ndinoshandisa GNU / Linux mune yakasarudzika nharaunda. Pamakomputa maviri ini ndine imwe ineGNU / Linux chete uye imwe yacho mbiri-mbiri ineGNU / Linux neWindows (zvinosuwisa kuti ndinoda mamwe mapurogiramu ayo, zvishoma zvavanoshanda zvirinani muWindows). Asi mubasa rangu ndine FreeBSD sevha yakaiswa, uye pakutanga yaive paGNU / Linux.
Ini ndinofunga kuti GNU / Linux, kunyange iri zvakare yakasimba kumatunhu ebasa, rinotarisisa zvakanyanya nharaunda dze desktop, uye BSD sevha inoshamisa
Ndasiya University of California. Ndokunge, makore angu ekutanga makumi mana ndaive muCalifornia mukati memakore ekuvandudza kweBM-PC, Microsoft, Apple, Google, Silicon Valley, nezvimwewo. Ini handisi nyanzvi mune ruzivo (biology), asi ndakagadzira makomputa hupenyu kune zvebhizinesi zvinangwa. Ini ndinofunga munyori akabata nzvimbo dzese, asi chinhu chepakati chinofanirwa kuve nacho
mamwe mazwi: Rezinesi ndizvo zvese. Kana iwe uchizoda iyo system iwe yaunodzora izere pamusoro, sarudza BSD. Linux neGNU haina kunyatso kusununguka - zvinoita sekutaura kuti People's Party inozivikanwa. Kana iwe wajaira kubhadhara maWindows uye uine hunyanzvi hwekugona uye uchida kutsiva mari yako nebasa uye uchidya kokonati rako, sarudza Linux. Sarudza kugovera kunoshanda zvakanyanya pakombuta yako - iwe unofanirwa kupedza vhiki uye kuyedza.
Kana iwe uri nyanzvi ine chinangwa chekugadzira zvirongwa zveinternet zvemakambani
uye pamwe iwe unoda kuzvifananidza neiyo inoshanda system (uye zvakabatana zvirongwa), sarudza FreeBSD. Kana iwe uchizongo gadzira zvakajairika internet zvirongwa (CMS, nezvimwewo), sarudza Redhat / Fedora. Asi, muzviitiko zvese izvi, mukupedzisira, iwe uchazodzidza ese masisitimu, Java,
Apache, Tomcat, Postgres, Whitebeam, node, Clang, nezvimwe, nezvimwewo Ipapo unogona kugona,
kana zvine basa. Kune zvakare emulator yeApple paLinux futi, handiti? Iyo huru Android
piritsi pamwe zvirinani uye unogona kukanganwa zvakapfuura, fungidziro dzerusununguko, zvishuwo zvako uye kumedza zvese zvinogadziriswa neGoogle, kana zvisiri GNU, iyo Windows clan, kana zvibvumirano zvepasi rose (Berne). Rusununguko haisi imba diki. (Pamusoroi wangu Spanglish, ndapota.)
Pindura kune gavilandelbosque
Sebastian Marchionni akadaro
Mhoro. Ini ndiri mushandisi weLinux. Ndinokuudza ruzivo rwangu kune chero anokwanisa kukushandira.
Ini handisi kuzoenzanisa neFreeBSD nekuti ini handina kuishandisa, asi zviri pachena kuti muzvinhu zvakawanda Linux ichakunda uye muzvinhu zvakawanda Linux icharasikirwa, zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Panyaya yekuita, maLinux ese haakwanise kuverengerwa sekunge akafanana. Ini ndanga ndichiedza kugovera kwakawanda kusvika pakupedzisira ndawana Debian, yaive nezvose zvandaida uye zvandaida. Kusvika systemd yauya uye ini ndakaedza Slakware naDevuan. Kunyangwe ndaenda nemumazhinji ma distros, ndakakatyamadzwa pandakaedza Slackware, mutsauko mukumhanya uye kuyerera uchienzaniswa neDebian yaive yakazara, zvaive sekutora kusvetukira mune ramangwana. Pakati pemamwe madhiri andanga ndisati ndamboedza mutsauko anga ave anoshamisa kwazvo.
Linux mint: Zvichida iri nyore kushandisa sisitimu yekushandisa kune wenguva dzose desktop mushandisi. Vazhinji vachati kwete, asi kazhinji vanozvitaura nekuti ivo vatove vakajaira kuLinux uye zvigadzirwa uye zvese zviri nyore zvakaenzana. Ndakaiyedza nevarume vangu vekare vane makore angangoita makumi manomwe uye vasina hunyanzvi hwemakomputa uye vakagadziriswa nekukurumidza nemahwindo (zvese xp ne70). Ini ndinoshanda sehunyanzvi saka ndaive nevatengi vaiyedza uye mhedzisiro yacho yaive yakafanana. Kune avo vasinganzwisise chero chinhu zvachose, ndicho chinhu chiri nyore chiripo. Mairi pachawo kuiswa kuri nyore pane kumisikidza wachi. Isa cd inorarama uye pane nzira pfupi inoti "gadza linux mint" pinda kaviri, isa nyika, mutauro, mirira maminetsi mashoma uye tangazve.
Devuan: haana kundipindura saDebian, iri muchikamu chekuyedza uye zvinoratidza, zvakare sezvavakanditsanangudza, ivo vari kutanga kufunga nezvekuita kuti ishande sevha. Kune mushandisi akajairika hazvina kunaka.
Debian uye yemahara software: Ini ndaigara ndichishandisa ese emahara software kunze kwevatyairi vevhidhiyo, zvisinei kuti munhu anonyanyisa sei, zvinopedzisira zvadonha kune zvakavanzika madhiraivha kana kubvuma vakasununguka vachibaira vhidhiyo kadhi kuita.
Pamarezinesi: Kutaura kuti maBSD akasununguka nekuti anotendera iwe kuti uvhare kodhi uye zvichingodaro, ndeyakazvimiririra uye pfupi-pfupi chiratidzo. GNU inovimbisa rusununguko rwekusimudzira tekinoroji, nepo BSD ichiita rusununguko rwekushandisa kwetekinoroji nemunhu. Iye zvino mukuita, sezvavanotaura zvakafanana, izere nemapurogiramu e-linux asingaenderane neGNU. Zvinotonyanya kukosha kutevedzera neGNU unogona kuita chimwe chinhu senge systemd, unogona zvakare neBSD; Pfungwa yangu ndeyekuti mumwe munhu anoreva kuti anogara achiwana nzira.
Panyaya yekuchengetedza, linux ine yakatarwa kugoverwa nechinangwa ichi, seFreeBSD uye zvakare kuiputsa, saKali.
Mhedziso yangu ndeiyi: Iyi nhaurirano uye kuenzanisa hazvina basa. Nezve chengetedzo, kuita, mukana wekugadzirisa nezvimwe ... ruzivo rwemberi kwazvo runodiwa kuti utore danho. Ivo vanhu vashoma vanogona kunzwa uye kukanganiswa nemisiyano iyi vanogona kunge vari ivo vatove kushanda mune ese maLinux uye maFreeBSD mapoka ekuvandudza, kwete kunyora uye kuyedza kugovera kana kushanda mune imwe diki kambani inotarisira maseva.
Sechimwezve chokwadi uye nekuda kwebasa rangu, ini ndinoneta nekuona vanhu vachishushikana nebasa. Ivo vanobhadhara yakawanda yeiyo mamiriro-e-iyo-e-Hardware Hardware ayo ivo ivo vanobva vatutira mune isina kuenzana zvine pc pc; Ivo vari kutsvaga software iyo inokwanisa kupindura kumamirioni ezviitiko zvisingafanoonekwi nezviuru zvezviitiko izvo zvavasina kumboshandisa (zviri nyore pane kugadzirisa chikanganiso, uchichiita zvakare kubva pakutanga), uchishandisa mafomu kuitira kuti pc igadzirise zviwanikwa zvirinani asi pa nguva imwechete ichivashandisa nekushandisa akawanda eaya maapp. Ini ndinoshandawo sehunyanzvi uye chipangamazano pazvinhu izvi nekambani yemagweta, uye ZVESE izvo "chengetedzo" izvo zvavanofungidzira zvakanyanya zvinogadziriswa nenzira yakapusa, kutyora vanhu kwete michina (sezvakaitwa naKevin Mitnick panguva iyoyo). Pane chinotevera chirevo, iyo yose mibvunzo uye yakatarwa mibvunzo, pasina kuziva uye kuzvipira kune chero zvainoita, hazvibatsiri uye kana iwe uine iyo nhanho yekuziva, kurongeka uye hunyanzvi, vanopedzisira vasisaite.
Ndiri kuzoedza FreeBSD uye pamwe mushure mekanguva ndichainyaradza uye haishande kwandiri, kwete nekuti yakaipa asi nekuti kubva pane zvandinoona hazvipindure kune zvandinoda, nenzira imwecheteyo mazana eLinux distros uye ese windows. Kune imwe FreeBSD zvinogona kunge zviri izvo zvaunoda. Mumwe munhu angangoshandisa imwe Linux asi iye akadzidza kushandisa FreeBSD uye anofara nayo uye anoiziva uye zvirokwazvo iri chishandiso chinoshanda: zvakafanana zvinogona kuitika kumushandisi weLinux.
Kubva kushandisa FreeBSD ndichave neruzivo. Vanhu vanogadzira BSD kana Linux havagone kuve mune zvese, ivo vanosarudza imwe uye vanoramba vachikudziridza, nenzira imwecheteyo yatinosarudza imwe uye kuramba tichishandisa kuti tishande, nemusiyano watinogona kuchinja nguva dzese ivo vasingadaro. uye ndosaka tichipedzisira tave kukurukura zvine mutsindo nyaya idzi, apo ivo chete vane kodzero yechokwadi yekutaura zvine mutsindo ndevaya mazuva ese pavanomuka vachienda kunoshanda kuti vakwanise masisitimu atinotaura nezvazvo zvakanyanya.
PS: Zvese zviri zviviri chinyorwa uye zvirevo zvisinei nekuisa BSD pakaipa zvinondikurudzira kuti ndiishandise nekuti ini handife ndakakwanisa kuwana ongororo isina rusarura pachinhu ichi, zvese zvakaitwa neBDS neLinux vanhu uye yega sarudzo ndeyekuishandisa pachangu.
Pindura Sebastián Marchionni
Iwe wakashoropodza chinyorwa changu uchipokana nhevedzano yezvaunofunga nezvako. Ini ndaigona kuzviita ndinonakidza uye ndokuudza kuti hauna chokwadi kana kuramba iwe, asi pandakanyora chinyorwa ichi pamwe ndanga ndichifunga zvimwe zvinhu zvakasiyana nezvandinotenda iye zvino neruzivo rwushoma. Naizvozvo, ini ndinogona kungotaura nokutendeseka kuti iwe uri pachokwadi chaizvo. Ameni.
Usatsoropodza chinyorwa chako. Zvakawanda zvakataurwa asi kwete. Asi chokwadi chekuti iwe unogara uchikwikwidzana nekuitwa kwechishandiso pane kufunga nezvazvo uye kuti ndiani achazoshandisa. Kupa muenzaniso, zvirokwazvo vazhinji vedu pano vanovenga windows, asi kune bhangi kana mumwe munhu anoshanda mumahofisi (muArgentina, nyika yangu) ndiyo chete nzira yavaizoshandisa, pamusoro pe XP, uye iyo chete iyo kudzidza iri kuzokubatsira. Zvakare, iwe haufanire kuidzidza zvakadzama, izvo chaizvo, zvakanyanya kukosha. NeLinux chinhu chimwe chete chinoitika zviuru zveLinux, zvese zvezvinhu zvakasiyana. Debian akandishandira, pamwe nekuda kwekureruka kwekushandisa uye kugadzikana, hongu ndakauya kwariri nenyaya yemafungiro, ndinofungidzira kuti mamwe akawanda ma distros achandishandira, asi ini ndakauya kuna Debian uye yakapindura kune zvese zvandaida.
Zvino, ndakapedza chinguva naDevuan, ine matambudziko andisingakwanise kugadzirisa, saka ndakachinjira kuSlackware. Kune zvandinoshandisa, ese anobatsira uye mune izvo zvakasiyana ini handina ruzivo rwakawanda sekushandisa icho, izvo zvinowanzoitika kune vazhinji vashandisi veLinux; kuti zvakaoma kushandisa ingano; Kupfuura ngano, chinhu chekare, nhasi zvese zviri nyore kushandisa kune akajairika mushandisi. Kana dambudziko ramuka chiri chimwewo chinhu, mune yangu semuenzaniso ndinonyatso kupererwa ne server x pese pandino gadziridza uye ndisina network network. Panyaya yekuita, kana iwe ukanyora masosi zvisinei nedistro, kumhanya kunoonekwa.
Pfungwa yangu ndeiyi, mazhinji akasarudzika pamusoro pesisitimu vasina huchenjeri hwekunakisisa kuti uwane zvakazara mazviri.
Nekusvika kweiyo systemd, izvo zvataida zvakanyanya nezveLinux zvakarasika zvachose uye zvese zvakabatana, serudzi rwemhando diki dzakasiyana windows nemahurongwa avo. Mashoma ma distros haashandise, mamwe eawo asina kana kumbotaura kuti vari kuzoishandisa. Iko mukana unobva waderedzwa uye pfungwa yeFreeBSD inotanga kuve inoyevedza. YeFreeBSD inogara ichitsoropodzwa kuti haina mhando dzakasiyana dzevatyairi uye nekudaro inoita zvishoma. Chaizvoizvo mumitambo chete uyu mutsauko wekumhanya ungave wakakosha, kune iyo directx inogara iri pamusoro pamahwindo zvakadaro. Pamwe mumwe munhu anoda kuita makuru evhidhiyo anodudzira, kana makuru maverengi kuverenga, asi vekupedzisira vaviri vanozofanira kushandisa izvo avo makambani avanoudza kuti vashandise, kwete izvo zvinoita zvakanyanya. Ndine semuenzaniso shamwari yangu yepamwoyo inoshanda mubazi rezvekudzivirira uye panotarisirwa hunyanzvi uye nesarudzo yehunyanzvi yezvishandiso zvekushandisa, inogadziriswa zvishoma nemibvunzo yezvibvumirano nemakambani, bhajeti nezvimwe ... kureva kuti, mari inosarudza uye kwete kungwara.
Ichokwadi zvaunotaura nezvevadziviriri vakasimba veFreeBSD, ndakavaverenga, asi zvakangofanana neLinux neWindows (Mac haikodzeri kutaurwa). Zvinenge zvisingaite kusave nerusarura nekuti pane yakakosha nyaya iri pakati inotsemura, ine chekuita nebasa ratinopa kune ruzivo, ruzivo nekusimudzira tekinoroji. Pakupedzisira, izvo zvinokonzeresa kupisa kwedu zvido zvinowanzova nezvakawanda zvine chekuita nazvo pane kuita chaiko. Iniwo ndinozvitaura semunhu anoda Linux asiwo mitambo uye kana zvasvika pakutamba opengl newaini vane basa rakaderera zvachose, hongu kune mitambo iyo PC yakawandisa zvekuti haina basa, asi kune nyowani zviri.
PS: kubva pakuona kwangu systemd ndiko kuparadzwa kweLinux sezvatinozviziva uye isu taizofanira kutarisa pakudzidza uye kunyanya kusimudzira distros dzisingaishandise uye kunyangwe kutsigira sarudzo dzakasiyana senge BSD kuti irege kuoneka "nyowani windows rine rimwe Zita ".
Nenzira, kubva pakutanga ini ndakaburitsa pachena kuti vaive mafungire angu ega.
Ini ndiri injinjini yesoftware mune imwe kambani yakanangana nekuvandudzwa kwesoftware software, kunyanya ini ndinoshanda neyekuumbiridza dzidziso, uye ndine hurombo Isaac, nharo dzenyu dzakapfuura murombo ndichienzanisa GCC naCLANG (pamberi peLLVM), ini handidi ziva kana wakambomira imwe nguva uchinzwisisa kuumbwa kwemusanganisi uye imwe asi kunyangwe GCC ichiita basa rayo yakafanana nekuenzanisa mazana matanhatu neFerrari, ini handisi kuzokurukura misiyano iwe yaunogona kuiona http://clang.llvm.org/comparison.html#gccKana Linux ikashandisa GCC, imo nekuti kernel kodhi yakanyatso kubatanidzwa kune GCC-yakatarwa sarudzo.
Ini zvakare ndinozvitora semunhu ane "hunhu" programmer mune zvese Linux neBSD kernel nzvimbo, pamwe nenzvimbo yemushandisi, uye ini ndinoitawo saizvozvo paLinux seFreeBSD.
Nezve chengetedzo, ichokwadi kuti SELinux ingaite kunge inonakidza, asi mune yangu yakakura ruzivo handina kuona chero munhu anoishandisa nemazvo, kunyangwe hazvo iyo Red Hat inoiisa nekumisikidza pane avo masisitimu uye paFedora. Kunyangwe zvakadaro, ndinogona kubvuma kuti Linux inogona kuve nechengetedzo, zvisinei, maererano nekusimbisa Linux inovimba neCGroups inoita senge yakaoma uye inosiririsa system ichienzaniswa neFreeBSD yekuongorora nzira, iyo kernel namespaces (izvo vanhu ziva semidziyo munzvimbo yemushandisi) kutevedzera kwakashata kwemajere eBSD uye nekukanganisa kwakawanda (ona iyo / proc nyaya mukati memidziyo).
Zvinosuruvarisa kana Linux kana BSD inogona kuzviti microkernel, dhizaini yavo inoenderana nekumhanya yakabatana ma module uye kutaura chokwadi ini ndaona linux ichiputika ne kernel panics kakawanda kupfuura BSDs.
Kuita kwacho? Zvakanaka, zvinoenderana, Linux ine makambani mazhinji kuseri kwayo uye madhiraivha mazhinji akagadzirira kwazvo, nyaya yeiyo e1000e (intel network kadhi) inouya mundangariro, zvinogona kuti mune mamwe mamiriro eiyi BSD maitiro ine zvakashata , Asi isu hatifanire kukanganwa kuti vazhinji vagadziri vanomisikidza yavo netiweki Hardware paBSDs (switch, ma routers) neyakajeka Hardware uye ndipo apo varombo Linux vanyadziswa.
Linux idambudziko reropa, / sys, / proc, ioctls (uye ini handisi kungotaura nezvezviteshi kana block / hunhu zvigadzirwa), kuvhura NETLINK mhando zvigadziko, sysctls ... Zvese izvi kutaurirana nekernel, muFreeBSD iwe Ini ndichaipfupisa: sysctl, period.
Uye ini handisi kuzotsanangura zvakawanda, kuti kuenzanisa kune ruvengo, munhu wese ari kutsvaga info:
PF vs iptables, kana kana iwe uchida, netfilter
FS hutongi muFreeBSD vs Linux, uye mundiudze chii / run uye / var / run ndezve; / midhiya, / mnt, uye / run / media; / opt uye / usr / yemuno uye zvakawanda zvisina maturo.
Uye wadii kuenda kumberi, zvinonyangadza zvehurongwa, musiki wedhimoni rako rakanaka, avahi daemon.
Verenga iyo FreeBSD (/ usr / src) uye kodhi yeLinux, wobva wasarudza zvaunoshandisa
Eubheti Erg akadaro
klxox nkcnsxgxxbx issfsjsh
Pindura kuna Eubeth Erg
Rodrigo Mariano Villar Vespa akadaro
gnu / linux iri nani uye zvakare ine yakawanda software
Pindura Rodrigo Mariano Villar Vespa
David glz akadaro
Matenga, mushure mekuverenga zvese izvi zvirevo ndakaona kuti pane gakava pakati peiyo system iri nani pane imwe kwemakore ... ndichienzanisa semuenzaniso Mac OS neWindows mune chero vhezheni yayo uye ndichienzanisa Windows neLinux, uye ikozvino ndave kuchiona neLinux neBSD mune chero vhezheni yavo. Chokwadi ndechekuti vese vakanaka sezvavanotaura zvinoenderana nerudzi rwevashandisi uye kutaura chokwadi munhu wese achati OS yavanoshandisa ndiyo yakanakisa nekuti ivo vari kushandisa imwechete poindi yekuenzanisa kana akati wandei, iyo OS enzaniso iri panharembozha ... nekuda kwerombo rangu ndingati, ndanga ndichifambidzana nemazhinji masisitimu anoshanda kubvira Windows 97 iyo yaive OS yekutanga yandakashandisa, ipapo yaive XP uye ipapo ini ndakanga ndisina kana poindi nekuti kwaingova kugadzirisa uye kugadzirisa, ipapo ndakave neruzivo Kubva pakusangana nevadzidzi vecomputer science ivo havana kundidzidzisa chero chinhu: v asi ini ndakakwanisa kushandisa nguva uye kudzidza kubva kwavari, vakashandisa Debian, ndipo pandakadzidza kuti paive mamwe OS uye kuti aishandiswa kune zvimwe zvinhu ndakanzwisisa kuti kune akajairika mushandisi yaive Windows uye hongu Iwe waida server, waishandisa Linux, nei vaidzidzira uye kumisikidza maseva muLinux, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini ndaive chikoro chesekondari, handina kunzwisisa kuti izvi zvese zvakashanda sei nemazvo, ndakatanga kuongorora uye kuverenga zvakawanda nezve iyonhoroondo yazvino mashandiro esisitimu uye nekwavakatangira, ipapo ndakasangana neMac OS uye mazhinji Linux distros panguva iyoyo ndakafunga kuti BSD yaive Linux: v asi ikozvino zvandine ruzivo rwakawandisa nezve chimiro cheOS neiyo kernel, zvakare mutauro C, nezvimwe, ndiri mushandisi weLinux kusvika nhasi ndinoshandisa Archlinux ndakatanga kuishandisa kudzidza uye ndakaifarira, izvozvi ndinotora openBSD, kubva pane zvandinoona zvakanaka kwazvo kugona kushandisa kodhi iri nzira yaunoda, zvakare yakagadzikana asi hazvireve kuti ndicharega kushandisa Arch Linux, kana kuti ndorega kushandisa windows, kana iri yeMac ndinoifarira kuti ive nyore uye nyore kushandisa muzuva rimwe chete iwe unodzidza kushandisa zvishandiso, taura zvakanakira nekuipira kweumwe neumwe hazvireve kana mumwe ari nani pane mumwe, zvinongobatsira mushandisi kusarudza zvinoenderana nezvavanoda, nei maOS ese aine nzira dzakasiyana kusvika nhasi pasina yakakwana.
Pindura David glz
Iko kukakavara, ese ari maviri akanaka, akatsiga uye akakomba, Rarama kwenguva refu zvese zvine nhaka kubva kuUNIX (kunze kweMicrosoft);)
Tarisa, ini handifunge kana kuramba uyo akanyora chinyorwa ichi, kana kumutonga. Ndiri kungotaura pane zvakaitika kwandiri ndichishandisa zvese * mhando * dzesystem: kana mumwe munhu akagumburwa pane ino blog uye akaronga kutumira rm kuma windows, kana kutomboedza mamwe masisitimu.
Linux: shandisa Gentoo. Yakanaka kwazvo, zvese graphic uye kurodha pasi nekumisikidza. Zvishoma zvakakwenenzverwa kuisa nemirairo, asi kana iwe uchishingisa kana kuziva imwe syntax, saka ndeyako. Zvakanaka, ini ndichiri kuyedza muVirtualBox, saka pamwe ndichawedzera chimwe chinhu mune ramangwana nekuti ini handichishandise zvakanyanya uye ndoda "kuchiyedza" zvishoma.
Arch… zvakanaka, sekuziva kwangu, zvinongouya mu x64. Pfungwa yakaipa: paive nenguva iyo processor yangu yaive x32 kana x86, ini handirangariri zvakanaka. Kick uye upanduki kuitira kuti iwe ugone kuiyedza muVB; zvese zvaive zvisina basa. Asi saGentoo, kutemwa nemusoro kana iwe uchida kuiisa nemirairo. Ndokusaka, iwe pawakatenga processor yakadaro, handina kufunga nezvekuiisa. Iyo mirairo iri senge mune chero linux, asi sekutaura kwandakaita, ini handina kuishandisa, saka pamwe ikozvino ndichaedza kuyedza.
Linux Mint: yakanaka. Yakanaka kwazvo kune vashandisi seni, vari kutsvaga chimwe chinhu chakawanda desktop nekuti ini handisi wekubira, ndoda kushandisa maawa ndichitaipa mirairo uye kugadzirisa mafaira kuitira kuti iyo system iite yepakati nepakati basa. Ini ndinorangarira kuti ini ndaive nesoftware centre, kana chimwe chinhu chakafanana, kwandaigona kurodha zvirongwa zvavakandiudza. Mapurogiramu akanaka, akasiyana siyana awo, ini ndaigona kuisa .deb pasina dambudziko. Kuita kwakanaka, kunouya mumhando mbiri dzekuvaka. Chitarisiko chakanaka chemifananidzo (pamwe nemamiriro ekuratidzira nekutadza). Ini ndingati zvinokurudzirwa kune avo vasiri kutsvaga chimwe chinhu chakaomarara. Ndinozvitenda, asi kubvira nhasi vanokurasa iwe nekuda kwekupa maonero ako ... zvakadaro, ini handipe zvakanyanya zvavanogona kundishora, ndosaka ndichisiya.
Ubuntu:… mamwe matambudziko, ndinofunga ndinorangarira. Chikonzero chikuru chandakamira kuchishandisa ndechekuti ndakaverenga nezvemashure, handizive kana iri pano kana kumwe kunhu. Ini ndinofanira kuzviongorora ndega.
Debian: zvakanaka. Kunyangwe kana iwe usingade kubata nemirairo, shandisa zvirinani Ubuntu, Linux Mint, kana dzokera kuWindows. Mapurogiramu akasiyana siyana. Kusununguka kukuru kwekushandisa kwemushandisi. Iyo inouya mukuvakwa kwakasiyana siyana. Yakasimba kwazvo, kunyangwe kana ukacheka iyo "apt-tora kusimudzira" ... gadzirira kutangazve iyo yekumisikidza. Iyo zvakare ine akawanda mapurogiramu emarudzi ese. Rumwe ruzivo nezve iyo yekumisikidza: zviri nyore kwazvo, asi ini handizive kuti nei gehena ichitadza izvozvi apo ini ndichiedza kuiisa muVB (ndine fungidziro; ramba uchiverenga uye iwe uchaona nei ndichifunga kuti kumisikidza kunokundikana).
Red Hat: muhupenyu hwangu ndaigona kushandisa imwe vhezheni iyo yakanga isiri iyo kubva kumakore ekutanga. Ini ndinofunga iri kubva panguva iyo yainzi Red Hat, ikozvino ndinofunga inonzi RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Ini handisi kuzopa zvangu zvemunhu data kune imwe kambani isingatombondirega ndiyedze iyo system kuti ndione kuti iri sei.
Solaris: zvakafanana neRed Hat. Kunyangwe ndakaedza kurodha pasi OpenSolaris, asi zvaive zvakafanana.
Oracle: usamboishandisa, iwe unofanirwa. Kana kuti zvimwe zviedze.
Mandriva: Ini handina kuishandisa, handizive zvakawanda.
kuvhuraSUSE: kana, ini handina kumbozviedza. Handizive kana ndichazviita.
Yapfuura: Ndakaifarira pandakanzwa kuti pakanga pasina chikonzero chekurodha pasi "kuburitswa" kana chero chinhu chakadai: imwe vhezheni kana chimwe chakadai, asi ndakafunga nezvazvo ndikafunga kushandisa imwe OS.
Manjaro: Ndinofunga ndakamboishandisa kamwe chete. Handirangariri zvakawanda.
Huye, iwo ndiwo andinorangarira kubva kuLinux. Iye zvino tinoenda kumafuta, kune akaoma uye anorema: BSD-UnixLike.
YakaomeswaBSD: marara akazara. Ini handina kukwanisa kubata, mushure memasvondo anopfuura maviri ndichinetseka (nekuti ini ndanga ndatoti ini handisi programmer kana hacker kana mumwe weava vakangwara) kumisikidza chero zvekutanga. Izvo zvinongouya mu x64. Iyo haishandisi "pkg" senge FBSD, inoshandisa "pkg-static", iyo yandisati ndamboverenga nezvayo (uye handizive kana FreeBSD ichiziva zvakawanda nezvayo), asi kusvika kwandaigona kuishandisa, yakashanda senge yechinyakare pkg. Nehurombo, mushure mekunge ndaisa pasuru yayo yekuisa kuti ishande, ini handina kana kukwanisa kuisa pkg, nekuti yanga ichindiudza kuti kwaive neraibhurari isipo kana chimwe chakadai. Mune iyo FBSD foramu ivo vaingoda kundiudza nezvazvo, nekuti yaive imwe OS, asi ivo vakandiudza kuti ndiedze kuisazve; kuti pamwe iko kukwidziridzwa hakuna kuzadza mushe. Handizivi. Muromo wakashata kuravira.
MaharaBSD: yakaipa uye yakanaka. Rudo uye ruvengo. Matambudziko uye mhinduro, kunyangwe dzimwe nguva ndaisatombozviwana. Ndine DVD player uye kusvika parizvino handigone kuti ishande pane ino system. Iyo inoshandisa iyo UFS fomati, zvinoenderana nezvandinoziva. Rudzi rwemafomati kunyangwe rwekunze uye risingazivikanwe kupfuura iwo andaona muLinux. Fomati isingataurike mune ese linux yandakaedza, kunyangwe yanga isiri mune dzakawanda. Zvakaoma, dzimwe nguva hazvigoneke, kubata zvimwe zvinhu. Uye kanganwa nezve kushandisa shanduro dzekare: Ndakaverenga nezve vashandisi vachiri kushandisa shanduro pamberi pegumi. Ini ndakanga ndisingazive chero chinhu nezvazvo uye ndakaedza kuisa 10 kune yangu pc, kutadza. Ndiri kuedza kuisa 10.2, njodzi. Ini ndakaguta uye ndotsvaga 10.3. Chekupedzisira, asi chete paDVD. Sezvo na x kana na z, yaigara ichindipa kukanganisa kana ndichiedza kuiisa paUSB. Ehezve, usafunge nezve kushandisa 11.1: Ndakaverenga mushandisi akamira kushanda akati wandei zvinhu kana iyo system yese, ini handirangariri zvakanaka. Kana iwe uchibavha, iwe uri musayendisiti wemakomputa, iwe unopihwa aya manias, kana iwe unongoda kurwa seni kuti ndionewo kuti zviri sei kwauri, zviise. Iyo ine zviteshi, izvo dzimwe nguva zvinopunzika uye dzimwe nguva zvisingaite. Une pkg, iyo isiri yakaipa, asi ndinovimba havazoichinje zvakare munguva pfupi sezvaive ne "pkg_add" kana "pkg_delete" ndinofunga, iyo yava "pkg" uye chero chaunoda kuita. Iwe unogona kusimbisa iyo system, iwe une maturusi ezvo, zvinoenderana nelei. Iwe unogona kuita pasina graphical nharaunda, ingangoita seLinux, asi kwandiri zvirinani, zvaive zvishoma zvishoma kwandiri kuti ndibate kupfuura muLinux. Uye ini handizive zvimwe zvekuudza: zvinoita kunge Linux, zvakangosiyana. Iyo haina kushandisa systemd, saka kana iwe usingade kana kuivenga, unogona kushandisa iyi mhando yeOS, iyo yandinofunga kuti haishandise (ndinofunga inoshandisa systemv; ndine urombo handisi anobira uye ini handifarire kugadziriswa nemweya wepamusoro, saka kana ndakanganisa uye iwe uchida kundiita kuti ndione, edza kusaita zvekunyepedzera).
Parizvino, kunze kwemahwindo 7, xp, 98, 95, uye inonzi vista marara uye iyo chaiyo mrd kubva kuhwina 8 na8.1… ndidzo dzandaishandisa. Nzira iri pamusoro, saka kana iwe uchifunga kuuya kuzondirwisa necomputer science kana hacker nharo, ndiri kutokuzivisa iwe kuti ini handidi kupindura iwe. Kutanga nekuti ini handitaure pano nezve izvo. Imwe yacho ndeyekuti ini handisi kuzotaura nezve zvandisingazive. Uye pakupedzisira, nekuti kunyangwe iwe uchiziva, kana uchizvitutumadza uye uri mukuru pakushandisa ichi kana icho (sevose vateveri vakanaka), tanga waedza kubuda muhurongwa hwako uye edza kushandisa chimwe chinhu chisingarume.
Ita sekuti peji rakanzi LinuxAdictos haina tsvete.
munguva pfupi chinongori chinhu chakanaka nezve bsd ndechekuti iwe unogona kumhanya / kutevedzera linux. WoW iyi fananidzo inosetsa.
esteban futi akadaro
Chero bedzi bsd iine 32-bit rutsigiro, hazvina basa, linux yakamira kuve panguva yekusashandisa 32-bit. Mabiti haana kunyangwe ari sekutaura kwavo kuti kwapera, ini ndiri kushanda mukusimudzira iyo 64-bit system uye nekuvandudza vatyairi vavari kutora kubva mukutenderera
Pindura kuna esteban tam
Ini handinzwe kusasarura muchinyorwa, BSD ruzivo senge kusimba kweZFS, iyo Linux emulator, zvinyorwa zviri muFreeBSD Handbook kana inonakidza Ports yaive refu pamberi peAUR muArchlinux isipo. Mamwe mawebhusaiti senge https://programadorwebvalencia.com/bsd-vs-linux-en-escritorio/ , kana zvinyorwa zviri pamutemo https://www.freebsd.org/doc/es/articles/explaining-bsd/comparing-bsd-and-linux.html Ivo vanopa chimwe chidimbu cheruzivo chakakosha kuti usaregeredze.
NomadBSD kana GhostBSD zviri nyore kwazvo kumisikidza kupfuura chero GNU / Linux, kana OpenBSD, kuti yavo yekumisikidza yakanaka, uye iwe hautaure nezvayo muchinyorwa. NomadBSD inogona kumhanya pane yakapusa USB nekushingirira uye une FreeBSD yakazara isingade rakaomarara dhisiki, kana kana iwe uchida iwe unoriisa gare gare kune rakaomarara diski.
Uye zvakare, chinyorwa chinotaura pamanyepo mazhinji andisingazive kuti munyori akaabvepi, senge iyo FreeBSD inogadzirwa kubva kuMacOS X ¿??
Uye haataure nezvekuti yechinyakare uye inonetesa sei SystemD system uye nei paine zvakawandisa uye zvakawandisa zvinoteedzera BSD masisitimu uye kubvisa SystemD bhutsu, nekuti yakaipa kwazvo. Muchokwadi, kune mamwe magovana anoshandisa GNU software neFreeBSD kernel seDebian, semuenzaniso.
Chinyorwa zvakare hachireve kuti kune vazhinji vanogadzira vanoshanda muBSD uye zviitiko zvakaita seHatathons kupfuura iyo chupiguay nharaunda yevashandisi vanoshandura mifananidzo, madingindira nemifananidzo muLinux kugoverwa izvo zvese zvavanoita kutevedzera Windows, pane kunetseka nezve kuva nezvakanaka kodhi, inobatsira uye yekukwiridzira-zvinyorwa, uye kuisa chengetedzo padanho reiyo inoshanda system, sezvinoita OpenBSD
Pindura kuna Patri
Google2Ubuntu, shandisa Google izwi raira muUbuntu
Runyerekupe kana chokwadi: Bill Gates vana vanoshandisa Linux!?